Space Marshals yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Kunyangwe ndichifunga kuti havazombosvika padanho remazita ekunyaradza, kune akawanda akanaka mitambo muApp Store. Dambudziko nemitambo yakakosha ndeyekuti mazhinji anobhadharwa, uye haasi akadhura. Ehe, ichokwadi, kune mamwe ari pa € ​​0.99, asi iwo anowanzo ari mitambo nekutenga kwakabatanidzwa kana kudzokorora zvakanyanya. Mumwe weayo akanaka mitambo iyo isingasvike zvakachipa ndeye Space MarshalsAsi kurumidza, ndezvemahara kune yakatemwa nguva!
Space Marshals mutambo uyo unotipa isu nenyaya ine yakamisikidzwa maficha eiyo Kumadokero muchadenga. Hongu, paunenge uchiverenga. Iye protagonist ndiye aimbove mukuru anga achishandira mutongo wake mutirongo kusvikira mubatsiri wake amumutsa, achimunyevera kuti paita tsaona uye kuti vasungwa vese vatiza. Sekare-yemubatanidzwa, isu tichafanirwa kuenda kwavari kuti vadzose ivo vese kunzvimbo yavaisafanirwa kunge vakasiya.
Space Marshals, wechitatu munhu shooter mutambo
Ndingati Space Marshals munhu wechitatu shooter mutambo. Iyi mitambo inosiyana neFPS kana wekutanga-munhu kupfura mune izvo chete, mune izvo muFPS tinoona zvese sekunge isu taive protagonists uye mune wechitatu-munhu shooter isu tinoona hunhu hwatinodzora. Chero zvazvingaitika, vagadziri vayo vanoti iwo mutambo we tactical chiito ushingi. Semantics, ndingati.
Asi zvinopfuura kutsanangura kuti Space Marshals yakaita sei, chinhu chakanakisa ndechekuti iwe uzvitorere uye uzviedze pachako Mutambo wacho wakanaka chose, une magiraidhi akanaka uye kurira uye kunze kwekusimudzira une mutengo we € 4.99. Hazvizivikanwe kuti ichave yemahara kwenguva yakareba sei, saka zvakakodzera kukurumidza. Panguva ipi neipi iwe unogona kudzokera kunobhadhara (kana kwete).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Space Marshals yemahara kwenguva shoma. Mhanyai, imi mapenzi!